Njikwa tiketi IT - Motadata
Maka iji Okwu njikwa tiketi IT
Jiri nwayọọ na-akwọ ụgbọ mmiri site na ajụjụ ndị ahịa gị niile
Motadata ServiceOps na-enyere gị aka ịmegharị usoro ma mee ka ndị nnọchi anya ndị ahịa nwee ike ịhazi, rụọ ọrụ nke ọma, yana inye aka - na-echekwa ọtụtụ oge maka azụmahịa gị na ndị ahịa gị.
Ihe ịma aka Njikwa tiketi IT
Ụlọ ọrụ niile chọrọ ụzọ ha ga-esi na-edozi nsogbu na arịrịọ ndị ahịa na ndị ọrụ ha welitere. Ụdị arịrịọ ahụ dịgasị iche site na nhazi gaa na nhazi, na ọbụna n'ime otu nzukọ, gafee ngalaba dị iche iche. Enweghị usoro tiketi kwesịrị ekwesị, a gaghị edozi nsogbu ndị a nke ọma ma ọ bụ nke ọma.
nke ndị ahịa churn
nwere ike igbochi ma ọ bụrụ na edozi nsogbu ndị ahịa na kọntaktị mbụ n'onwe ya.
Motadata ServiceOps nwere ike inyere ndị otu aka ịnye nkwado n'ofe ọtụtụ ọwa, nzaghachi dị ala & oge mkpebi, kwalite ọrụ onwe onye, ​​yabụ na-abawanye afọ ojuju ndị ahịa.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka njikwa tiketi IT
Megharịa mbọ ọrụ ndị ahịa gị
Chọpụta ma weghara okwu sitere na ọwa ọtụtụ
Nchọpụta mbụ na njide nwere ike ịbịa site na ọwa dị iche iche dị ka email, ekwentị, ọnụ ụzọ ọrụ onwe onye, ​​​​ma ọ bụ onye nnọchi anya na usoro tiketi dị irè kwesịrị inwe ike ịkwado ha niile.
Ndị ọrụ kwesịkwara ịhụ ọganihu na mkpebi nke okwu ha site na portal ọrụ onwe ha na-enweghị mkpa ịkpọ ndị otu oche ọrụ.
Ọzọkwa, ngwaọrụ nlekota kwesịrị inwe ike ịkparịta ụka ozugbo na usoro tiketi wee malite nzaghachi tupu ihe akaebe ọ bụla pụta ìhè nye ndị ọrụ njedebe.
Kwalite ozi onwe onye
Ịza ajụjụ ugboro ugboro nwere ike na-ewe oge. Yabụ na ndị ọrụ njedebe ga-enwe ike ịnweta portal ọrụ onwe nke na-agba ha ume ka ha chọta azịza nye nsogbu ha tupu ha etinye akwụkwọ tiketi si otú a na-ebelata ibu dị na ndị na-ahụ maka ọrụ IT.
Enwere ike ịmepụta ma bipụta FAQ na akụkọ ndị na-ekwu okwu ndị na-emekarị, na-emegharị ugboro ugboro na ntọala ihe ọmụma nke ndị ọrụ nwere ike ịchọ site na iji ihe nchọta nwere njirimara nzacha dị elu.
Jiri akpaaka chekwaa oge
Akpaghị koodu na-enweghị ike yana ike dị iche iche nwere ike inye ndị otu oche ọrụ ike chepụta iwu azụmaahịa omenala.
Ndị otu desktọpụ ọrụ nwere ike iji akpaaka n'ihe gbasara ịnye azịza akọpụtagoro na nzaghachi mkpọ site na onye nnọchi anya mebere, nnabata akpaaka, oke tiketi akpaghị aka site na AI dabere na njikwa ibu na-edozi ibu nke AI na-akwado, na ihe ndị ọzọ iji kwalite arụmọrụ ha.
Tọọ ụkpụrụ na protocol doro anya maka SLAs & Mgbasa
Enwere ike idozi tiketi ozugbo dabere na mkpa yana enwere ike tụọ arụmọrụ SLA site na iji ihe nleba anya.
Enwere ike ịtọ oge nzaghachi yana ọkwa dị iche iche nke mmụba site na matrix escalation nwere ike ịmepụta.
Yabụ mgbe emepụtara tiketi ma ghara ịga n'oge a kapịrị ọnụ, mgbe ahụ ndị na-eme ihe nwere ike nweta ọkwa maka mmebi SLA na tiketi ahụ nwere ike ịbawanye na akpaghị aka dị ka matriks siri dị iji hụ na ọ nweghị tiketi ahapụla.
Akụkọ na nghọta
Iji akụkọ zuru ezu iji ghọta arụmọrụ otu ahụ na-enyere ndị njikwa aka ịghọta mpaghara maka nkwalite.
Usoro tiketi dị mma ga-enyere ndị njikwa aka ịhazi akụkọ na igbe mbata ha mgbe niile.
Akụkọ ndị a nwere ike inye aka chọpụta metrics dị ka ibu tiketi na ndị otu oche ọrụ, oge ntụgharị, ọnụego mkpebi nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ, wdg. Ndị nlekọta na-enyere aka ịhụ ngwa ngwa nke otú ihe si aga na otu esi emeziwanye ha n'ihu.
Ọrụ ndị ahịa agaghị apụta na ejiri ya na tebụl ọrụ 24/7.
Ngwa mkpanaaka anyị nwere ike inyere gị aka ịrụ ọrụ ntinye tiketi site na ekwentị mkpanaaka gị. Yabụ, ndị ọrụ nka nwere ike inyere ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa aka na-enweghị mkpa ịnọ n'ụlọ ọrụ.
Uru Motadata Maka Njikwa tiketi IT
Usoro ntuziaka iji jikwaa okwu ndị ahịa na arịrịọ nwere ike ịhapụ ndị ọrụ nka gị na-agbasi mbọ ike ịnọgide na-ejedebe na-egbu oge ọrụ ndị ahịa gị.
Usoro nhazi dị mfe nke na-achọghị ọzụzụ.
Debe usoro gị wee mee mgbanwe ndị dị mkpa na ngwa ahụ dịka iwu omenala, ọrụ ndị ọkachamara, usoro ọrụ, SLAs, wdg.
Jiri REST API jikọọ Motadata ServiceOps na ngwaọrụ ndị ọzọ ọ bụla.
Ngwọta Motadata ITOps Dodo Azụmahịa Na Track Na Track
Na-akwado netwọkụ ndị ọrụ anyị na-eto eto